FAQs - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Inona no YIC-Electronics.com?
Aiza ny YIC International miorina?
Ahoana ny fomba ampiasako ny fampiasana ny Part Search anao?
Inona avy ny karatra matanjaka?
Ahoana ny fomba hametrahana lamina?
Tsy misy vidiny ao amin'ny pejy vokatra - Inona no ataoko?
Inona ny fomba fandefasana afaka manohana?
Inona no fomba fandoavam-bola atolotrao?
Afaka mahazo teny Net ve aho?
Inona no antoka omena amin'ireo faritra amidy?
Afaka mamorona accoutn vaovao amin'ny tranokala ve aho?
Amin'ny ora inona ianao miasa?
YIC-Electronics.com dia tafiditra ao amin'ny YIC International Co., Limited. YIC-Electronics.com izay ahitanao singa elektronika haingana. Hatramin'ny nanokafana ny taona 2008 dia misy ny famaritana singa elektronika, Ny tahiry rehetra, izay mitentina mihoatra ny 460 000 entana, dia avy amin'ny mpanamboatra singa elektronika sy ny solontenany nahazo alalana. Ireo vokatra rehetra ireo dia azo anaovana haingana. Ireo tapany rehetra ireo dia manome antoka 100% vaovao tany am-boalohany misy fiasa tsara.
Ekipa misy matihanina miisa 28 miorina amin'ny toerana any Hong Kong isika. YIC Hatramin'ny taona 2008. Mino: ny kalitao no fanahintsika.
Nahavita fikarohana haingana ny entanay haingana sy mora avy amin'ny toerana misy ny tranokalanay izahay. Ao amin'ny pejin-tranonkala YIC-Electronics.com ambony indrindra, ampidiro tsotra fotsiny ny isan'ny anjaranao ary tsindrio "Fikarohana". Hahazo valiny maro ianao, tadiavo ilay ampahany tadiavinao. Avy eo ianao afaka mandefa ny fangatahana Hangatahana Quote na RFQ amin'ny Internet, ny varotra mpiara-miasa amin'ny teny YIC dia hifandray aminao tsy ho ela miaraka amin'ny vidiny sy ny fandefasana mailaka.
Manokana manokana ho an'ny chip-tsika IC sy IGBT Modules Electronics Components Distributor isika.
Ny marika fizarana IC: VISHAY / IR, NXP, ON, INFINEON, ST, NS, MICROSEMI, XILINX, Fitaovana Analog, ALTERA, TI, LATTICE, Broadcom, MAXIM, ATMEL, LINEAR, CYPRESS, FAIRCHILD, TOSHIBA, ACTEL, INTERSIL, AVAGO , PMC sy ny maro hafa.
Module IGBT / FETs: SEMICRON, EUPEC, INFINEON, MITSUBISHI, FUJI, POWEREX, IXYS, IR, ASTEC ary maro hafa.
Amin'ny alàlan'ny fandefasana ny RFQ / Quote avy amin'ny tranokala amin'ny famenoana ny taratasy miaraka amin'ny lisitry ny ampahany amin'ny fanontanianao sy ny fampahalalana momba ny fifandraisana, na ny Email RFQ amin'ny Info@YIC-Electronics.com, ny serivisinay dia hifandray aminao amin'ny alàlan'ny mailaka miaraka amin'ny teny nindramina aminao, aorian'ny fanekena nataonao na ny fahazoan-dàlana nankatoavina, alefaso am-pitiavana ny baiko nankatoavina na hanamafy ny vaovao amin'ny varotrao miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fangatahana, ny andiany amin'ny varotra dia handefa ny invoise Proforma miaraka amin'ny fampahalalana ny bankinay. ianao. Azafady mba tadidio mba hanondroana ny ampahany amin'ny isan-karazany, takiana habe sy mpanamboatra.
Azonao atao ny mandefa RFQ / Quote (URL: https: // www. yic-electronics.com /RFQ-Quote.htm ) Manontany an-tserasera na hiantso anay na mailaka anay ao amin'ny Info@YIC-Electronics.com hamerina handinihana ny mombamomba ny vidiny sy ny tahiry. Hanolotra ny fanamarinanay ho anao tsy ho ela izahay ary aorian'ny fanamafisana ny fanamafisana anao dia handefa ny invoisation proforma anao izahay handoavana ny vola.
Manao sambo maneran-tany izahay mampiasa mpampita vaovao iraisam-pirenena toa an'i DHL, FedEx, UPS, TNT ary EMS na mailaka HongKong. Ampiasao matetika ny DHL / FedEx. Azontsika atao ihany koa ny mampiasa kaonty fampiasan'ny mpanjifa. Ny ora fandefasana fenitra dia 1-4 andro fandraharahana (mahazatra mahazatra 2-3days) arakaraka ny haleha. Ny fomba fandefasana hafa dia azo resahina. Miezaka izahay mba hanomezana izay ilain'ny mpanjifa tsirairay.
Ny antsipiriany bebe kokoa: URL: https: // www. yic-electronics.com /shipment-way.htm
Izahay dia manaiky mialoha ny fandefasan-tariby an-tariby mialoha ny baikon'ny mpanjifa vaovao. Fomba fandoavam-bola: Famindrana ny / Wire Transfer / T / T) amin'ny kaonty HSBC, Western Union, PayPal (Credit Card). Izahay dia manaiky fomba fandoavam-bola hafa ho an'ny mpanjifa manokana. Net Term dia ho an'ny mpanjifan'ny fiaraha-miasa mandritra ny fotoana maharitra.About Bank fees: Charge Transfer Bank Charge USD15.00 ka USD30.00, ny HK HSBC mankany HK HSBC, tsy mila fiampangana. Aza adino fa manaiky ny fandoavam-bola ao amin'ny USD sy EURO, GBP, HKD.
Ny antsipiriany bebe kokoa: URL: https: // www. yic-electronics.com /payment-way.htm
Manana mpanjifa betsaka izahay manomboka amin'ny mpanjifa miverimberina hatrany hatrany amin'ny mpividy indray mandeha. Ny Net Terms dia azo alao hamerenany ny mpanjifa aorian'ny fandoavam-bola fandoavam-bola miaraka aminay.
Izahay dia manome antoka ny kalitao mandritra ny 60 andro na mihoatra, satria nafindra ireo ampahany. Ny faritra rehetra eto dia miaraka amin'ny fanamarinanay manokana momba ny fampifanarahana izay manome antoka fa hifanaraka amin'ny singa rehetra momba ny fanamboarana ireo faritra ireo. Ny faritra rehetra dia hizahana sy hiantoka ny ampahany vaovao 100% alohan'ny fandefasana. Raha toa ka tsy mahafeno ny endrika, ny lanja sy ny fiasan'ny mpanamboatra ny ampahany voarainao, hosolo ireo singa ireo isika na hamerina ny volanao. Ny paikadinay dia: Raha nolavina ireo fizarana amin'ny fisafoana miditra noho ny antony tsy misy fiasa, dia mila miantso anay ao anatin'ny 15 andro isam-piasana ianao hangataka RMA. Raha toa ka misy lesoka na olana amin'ny ampahany mandritra ny famokarana, fametrahana na fitsapana dia azafady mba hifandraisa aminay: Info@YIC-Electronics.com
Azonao atao ny mamorona sy mampiasa "Ny kaontiko" mba hisoratra anarana na hisoratra anarana ao amin'ny pejy amin'ny tampon'ny tranokala. Ao no hahitanao ny lisitry ny fanontanianao ary hanova ny mombamomba anao sy ny fampahalalana momba anao.
Ho an'ny teny nindramina, halefanay amin'ny alàlan'ny mailaka aminao izahay, ahafahanao mahazo fampahalalana bebe kokoa. na Email anay Info@YIC-Electronics.com
Ny ora fiasantsika no Mon. tamin'ny alàlan'ny Fri. AM9: 30 --- PM11: 00 Sat. AM10: 00 --- 12:00 (Time Standard HongKong)
Misaotra anao tamin'ny fanohananay. Raha misy fanontaniana na fanontaniana hafa, dia andefaso mailaka izahay. Ny adiresy mailaka: Info@YIC-Electronics.com